Isu tinoziva kuti muchafadzwa nezvamunotenga kubva kuComWales. Nekudaro, panogona kunge paine zviitiko apo iwe pauchazoda kudzosera zvinhu kwatiri @ Returns dept, Unit 21, Iyo Innovation Center, EBBW VALE NP23 8XA.
Iri peji (pamwe chete namagwaro ataurwa nezvaro) rinokuudza mamiriro uye mamiriro atinopa chero zvigadzirwa (Zvigadzirwa) zvakanyorwa pane yedu webhusaiti ComWales.com (yedu saiti) kwauri.Mifananidzo iri pane ino saiti ndeye mifananidzo chinangwa chete uye chaicho chinhu chinogona kusiyana, ndapota tarisa chikamu uye ean nhamba ndizvo zvaunoda usati waodha. Iyi mitsara uye mamiriro ezvinhu anoshanda chete kana iwe uri kutenga sevatengi. Vatengesi Vatengi vari pasi peshoko redu rekutengesa uye mamiriro ezvinhu anogona kuwanikwa kuburikidza neComWales Bhizinesi neMitemo
Ndokumbirawo kuti muverenge aya mazwi uye mamiriro ezvinhu nokungwarira usati waodha chero zvigadzirwa kubva kune yedu saiti. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti nekuraira chero zvigadzirwa zvedu, unobvuma kusungwa neaya mazwi uye mamiriro. Iwe unofanirwa kupurinda kopi yematemu aya uye mamiriro ezvinhu mune ramangwana referensi
1. Ruzivo nezvedu
ComWales inzvimbo inoshandiswa neComWales Limited (isu). Isu takanyoreswa muEngland neWales pasi pekambani nhamba 8806753 uye nehofisi yedu yakanyoreswa kuRoyal tower Bhizinesi Center, 3rd Floor, Capital tower, Greyfriars Road, Cardiff, CF10 3AG.
2. Service kuwanikwa
Nzvimbo yedu inongoda kushandiswa nevanhu vanogara muUnited Kingdom (nyika chete) uye isu tine kodzero yekusagamuchira mirairo kubva kune vanhu vanogara kune imwe nzvimbo.
3. Chimiro chako
Nekuisa rairo kuburikidza nesaiti yedu, iwe unogonesa kuti:
uri pamutemo unokwanisa kupinda muzvisungo zvinosunga;
iwe unosvitsa makore gumi nemasere;
unogara muUnited Kingdom (nyika chete); uye
urikuwana saiti yedu kubva kuUnited Kingdom (mainland).
4. Maumbirwo anoita chibvumirano pakati pako newe
Mushure mekuisa kodhi, iwe uchagamuchira e-mail kubva kwatiri kubvuma kuti tagamuchira yako yekuraira. Ndapota cherekedza kuti izvi hazvireve kuti kodha yako yakagamuchirwa. Yako Order inopa chinopihwa kwatiri kuti titenge Chigadzirwa. Yese mirairo inotarisirwa kugamuchirwa nesu, uye isu tichasimbisa kugamuchirwa kwakadaro kwauri nekutumira e-mail iyo inovimbisa kuti isu tagamuchira yako yekuraira (iyo Chibvumo Chokugamuchira) Chibvumirano chiri pakati pedu (Chibvumirano) chichaumbwa chete kana isu kukutumira iyo Kugamuchirwa Kwakasimbiswa.
Chibvumirano chinoenderana chete neaya Zvigadzirwa zvatakasimbisa muKugamuchira Kubvuma. Hatizosungirwe kupa chero chero Zvigadzirwa zvingave zvakave chikamu chewe kuraira kusvikira kugamuchirwa kwezvigadzirwa zvakadaro kwasimbiswa mune imwe yekuGamuchirwa Yekubvuma Kusimbiswa.
Chero zvokudhirowa, mapikicha, tsananguro kana kushambadza kwatinoburitsa, uye chero mafoto, tsananguro kana mifananidzo iri pane yedu saiti, inopiwa kana kubudiswa chete kuti ikupe iwe fungidziro yeZvakagadzirwa zvavanorondedzera. Ivo havaite chikamu cheMvumo pakati pako newe kana chero imwe chibvumirano pakati pako uye inoshandisa kutengesa kwezvakagadzirwa.
5. Kodzero dzevatengi
Kana iwe uri muchibvumirano semutengi, unogona kukanzura paInternet contract chero nguva mukati memazuva gumi nemana, kutanga pazuva raunenge wagamuchira Zvigadzirwa. Mune ino kesi, iwe uchagashira yakakwana kudzoserwa kwemutengo wakabhadharwa zvigadzirwa mukuwirirana negwaro redu rekudzosera (rakanyorwa muchikamu 9 pazasi). Vatengi vevatengesi havagone kudzima kutengesa kana chete zvinhu zvabhadharwa vobva vasiya muchitoro. Kodzero dzako dziri pamutemo dzinoshanda muEngland neWales.
Kuti utore chibvumirano, unofanirwa kutizivisa nekunyora. Iwe unofanirwa zvakare kudzorera Chigadzirwa (s) kwatiri nekukurumidza uye ivo vanofanirwa kugamuchirwa mukati memazuva gumi nemana kubva pakunyoreswa kune kero yekudzoka pamusoro, mune iyo mamiriro akafanana maakagamuchira ivo, uye nemutengo wako uye njodzi. Iwe une chisungo chepamutemo chekutarisira zvine mwero Zvigadzirwa ivo pavanenge vari nazvo. Kana iwe ukatadza kutevedzera ichi chisungo, tinogona kuve nekodzero yekuita newe kuti tikupe mubhadharo mukudzora mari yako kana kuramba you cancelationaltion.
Iwe haungazove nekodzero yekudzima Chibvumirano chekugoverwa kwe chero zvigadzirwa zvinotevera:
Mimhanzi, software yemakomputa, zvinhu zvekugadzira chikafu, mhete kana hutano uye runako zvinhu zvakaita semahure kana zvinhu zvakarukwa izvo zvisingakwanise kutengeswazve hutsanana izvo zvakavhurwa uye zvitengeswa zvinhu zvave zvichishandiswa; uye
zvinhu zvinogoneka kunze kwekunge paine chikanganiso chakawanikwa icho chingadai chisinga zivikanwe pasina kuvhenekera zvigadzirwa.
Ruzivo rwenzvimbo iyi yepamutemo kodzero, uye tsananguro yemashandisiro aungaitwa, zvinopihwa muKugamuchirwa kwekubvuma. Izvi zvinopihwa hazvikoshese kodzero dzako dzinoverengeka.
Kana uchida rumwe ruzivo nezve kodzero dzako dziri pamutemo, ndapota taura neko kwenzvimbo Dhipatimendi reKutengeswa Kwemagariro kana Citizen Advice Bureau.
6. Kuwanika uye kutumira
Yako Order ichazadzikiswa nezuva rekutumira rakarongedzwa mune Yekugamuchira Chibvumirano kana, kana pasina zuva rekutumira ratsanangurwa, saka avhareji yedu ndeye mazuva 3-5 ekushanda kubva pazuva rekurairwa Kugamuchirwa Kuvimbiswa, kunze kwekunge paine mamwe mamiriro akasiyana. Vedu kutumira vamiririri ndeveRoyal mail, UKMail, DPD uye TNT, kutsvaga maitiro anozopihwa kana vagamuchirwa kubva kuchitoro. UKMail uye DPD inogona kuteverwa pane yavo mawebhusaiti, tnt 5 manhamba manhamba anoteedzerwa neTNT webhusaiti. Chero ipi imwe nzira kunze kweRoyal mail inoonekwa sechibvumirano chekutumira uye haidzorerwe kunze kwekukuvara kana kurasikirwa kwaitika.
Orders yakaiswa pamberi pekwakatemwa nguva yakatarwa ichagadziriswa zuva rimwe chete uye ichaunzwa zvichienderana nechikumbiro chako chekuendesa chinopa zvimwe kuchengetedzwa cheki hazvidiwe uye zvese Zvigadzirwa zviripo.
Hakuzove nekuendeswa kana kubviswa kwezvakanaka kubva muchitoro kana muchitoro kusvikira mari yakajeka yatambirwa. Kana Mutengi akatadza kutora kuendesa kune chero ipi yeVakanaka kana vagadzirira kuendesa, kana kutadza kupa chero mirairo kana mvumo inodikanwa kuti Zvigadzirwa zviunzwe nenguva Zvikwereti zvichanzi zvinounzwa uye (pasina kusarura ku dzimwe kodzero dzayo) Kambani inogona: -
chengetedza Zvigadzirwa kusvikira chaipo chaipo kana kutengeswa uye kubhadharisa Mutengi pazvose zvinoenderana nemubhadharo (kusanganisira, pasina muganho, kuchengetedza neinishuwarenzi); uye / kana - inotevera kunyorera chiziviso kumutengi, tengesa chero chipi zvacho cheZvakanaka pamutengo wakanakisa unowanikwa mune mamiriro ezvinhu uye kubhadharisa Mutengi chero kupfupika pazasi pemutengo unobvumirana neMutengi.
7. Ngozi uye zita
Zvigadzirwa zvichave panjodzi yako kubva panguva yekuzvitakura kana kubviswa muchitoro chedu.
Kuve muridzi / zita rezvigadzirwa richangopfuura kwauri kana tagamuchira kubhadhara kwakakwana kwehuwandu hwese uye mazuva anosvika zana nemashanu apfuura zvedhora kadhi kana kubhadhariswa kwemhando yemabhadhara maererano neZvigadzirwa, kusanganisira kuburitsa uye chero chipi zvacho chakabhadharwa.
8. Mutengo uye kubhadhara
Mutengo we chero Zvigadzirwa zvichave zvakataurwa pane yedu saiti nguva nenguva, kunze kwekunge zviitiko zvekukanganisa pachena.
Mitengo iyi inosanganisira VAT asi isingabatanidze mutengo wekutakura, uyo unozowedzerwa kune huwandu hwakazara sekufanirwa kwazvakaiswa muDzidziso Yedu yekuendesa
Mitengo inofanirwa kuchinjika chero nguva, asi shanduko hadzizokanganisa maodha maererano neyatakatumira iwe Chibvumirano chekubvuma.
Hatina chisungo chekupa Chigadzirwa kwauri nemutengo usiriyo (wakaderera), kunyangwe mushure mekunge takutumira Chibvumirano chekugamuchira, kana kukanganisa kwemitengo kuri pachena uye kusingazungunuke uye ungangove wakakuziva iwe seyakashata-mutengo. .
9. Yedu yekudzosera mari mutemo
Paunodzosera Chigadzirwa kwatiri:
Kana nekuti iwe wakadzima chibvumirano pakati pedu mukati megumi nemana nguva yekutonhorera-kubva (ona clause 5.1 pamusoro), isu tichazo dzosera mari yacho nekuda kwako nekukurumidza uye, mune chero zvakadaro, mukati memazuva makumi matatu ezuva raunove naro unopihwa ziviso yekudzima kwako. Mune ino kesi, isu tichadzosera mutengo we Chigadzirwa zvizere, kusanganisira mutengo wekutumira chinhu icho kwauri kana chakatumirwa. Nekudaro, iwe unozove nemhosva yemutengo wekudzosera chinhu icho kwatiri. Isu tinokurudzira kuti zvinhu zvese zvidzorerwe kuburikidza nerekodhi rekutumira nzira, sezvo isu tisingazopiwi mhosva kune chero kukuvara kana kurasikirwa panguva yekufambisa;
nekuda kwechimwe chikonzero (semuenzaniso, nekuti iwe watizivisa zvinoenderana nechikamu 21 kuti haubvumi shanduko mune aya matemu kana mune chero mimwe mitemo yedu, kana nekuti iwe unoti icho Chigadzirwa chakakanganisika) inoongorora Chigadzirwa chakadzoserwa uye kana iwe uine kodzero, tinokuzivisa iwe nezvezvinangwa zvedu kugadzirisa, kugadzirisa kana kudzorera kuburikidza ne e-mail mukati menguva yakakodzera yenguva. Isu kazhinji tichagadzirisa kugadzirisa kwako, kutsiva kana kubhadhara mari nekukurumidza sezvazvinogona uye, mune chero mamiriro ezvinhu, mukati memazuva makumi matatu ekugamuchira chakaremara Chigadzirwa. Kana ukasarudza kudzoserwa kwechigadzirwa chakadzoserwa newe nekuda kwehurema chinodzoserwa senge mutemo wedu wekudzosera mari, kusanganisira kudzoserwa kwechikamu chemutero wekutumira icho chakanangana neiyo Chirema chinorema yekutumira chinhu icho kwauri nemutengo. incurred nekudzosera yakaremara Chigadzirwa kwatiri. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchikwanisa kugadziriswa kana kutsiva chimwe chakaremara Chigadzirwa hatizokubhadhara iwe kuti uitorezve chigadzirwa chakagadziriswa kana chakatsiviwa.
Chero maOdges ayo anopfuura mwedzi mitanhatu uye Chigadzirwa chakasimbiswa kuti chakakanganisika uye kudzoserwa kwakakodzera, iko kudzoserwa kunoverengerwa zvichienderana nezera reOrita uye iwe unodzoserwa huwandu hwakaenzana hwemutengo wekutenga wekutanga weiyo Chigadzirwa. Izvi hazvisanganise mutengo wekutakura weiyo yekutanga Order izvo zvisiri kudzoserwa.
Kudzoserwa kwemari ipi neipi inogamuchirwa kubva kwauri kuchaitwa uchishandisa kadhi rimwechete rakatanga kushandiswa newe kubhadhara kutenga kwako uye kuripwa muakaundi imwechete.
Kuti udzore Chigadzirwa kune chero imwe chikonzero, tarisa yedu Returns Policy
10. Yedu mhosva
Isu tinopa mvumo kwauri kuti chero Chigadzirwa chakatengwa kubva kwatiri kuburikidza neyedu saiti chiri chinogutsa mhando uye zvine chikonzero chakaringana kune zvese zvinangwa izvo zvigadzirwa zverudzi izvo zvinowanzo kupihwa. Iyi waranti haishande kune chero chakaremara mune Chigadzirwa chinomuka kubva kupfeka kwakanaka uye kubvarura, kukuvadza kukuvara, tsaona, kushaya hanya newe kana chero munhu wechitatu, kana iwe ukashandisa Chigadzirwa nenzira yatisingakurudzire, kutadza kwako kutevera mirayiridzo. , kana chero shanduko kana kugadziriswa iwe unoita kunze kwekutanga kwedu kwakanyorwa kutendera.
Unobvuma kuti chero Zvigadzirwa zvakatengwa zvakanyorwa seyaka giredhi A, giredhi B, zvigadzirwa zvekuratidza kana chashandisirwa stock (zvichireva kuti vangave vaine hurema hwakashomeka, kunge chiri fekitori yakagadziriswazve chinhu kana chingave chakamboendeswa kunze uye chakatumirwa senge chisingadiwe chinhu) uve newarandi yemazuva makumi mapfumbamwe egiredhi A uye ex-kuratidza uye mazuva makumi matatu ebanga B. Iko zvigadzirwa zvine giredhi A, giredhi B, kuratidzwa kwazvino kana kushandiswa kwesitoko zvichazoonekwa mune Rondedzero yechigadzirwa pane saiti.
Chikwereti chedu chekurasikirwa iwe chaunotambura nacho nekuda kwekutyora chibvumirano ichi chinogumira pamutengo wekutenga kweChigadzirwa chawakatenga.
Izvi hazvisanganisire kana kupera munzira chero ipi mhosva dhiri redu:
kwerufu kana kukuvara kwemunhu kunokonzerwa nekusakoshesa kwedu;
pasi pechikamu chechipiri (2) cheMutemo wekudzivirira weVatengi 3;
zvekunyepa kana kubiridzira
kana kutyora kwemaune kweMitemo iyi nesu kunogona kukukanganisa kuti ubvise chibvumirano pakati pedu; kana
yechinhu chero chipi zvacho chaisazova pamutemo kwatiri kuti tisabvisa, kana kuyedza kusabvisa, mhosva yedu.
Isu hatisi mhaka kune chero isina kunanga kana yakakonzeresa kurasikirwa kunoitika semhedzisiro yekurasikirwa kukuru kana kukuvadzwa uye kunyangwe kurasikirwa kwakadaro kuchikonzerwa nekutyora nemaune kweChipangano ichi nekwedu izvo zvinokupa mukana wekupheta chibvumirano pakati pedu, kusanganisira asi kwete chete:
kurasikirwa kwemari kana mari;
kurasikirwa kwemapundutso kana zvibvumirano;
kurasikirwa kwekufungidzira kwekuchengetedza;
kurasikirwa kwedata, kana
kutambisa manejimendi kana nguva yehofisi zvisinei zvichimuka uye zvichikonzerwa nekushungurudza (kusanganisira kusaitira hanya), kutyora chibvumirano kana zvimwewo, kunyangwe zvichizoonekwa, zvichitaridza kuti chikamu ichi 10.5 hachizadzivirire zvichemo zvekurasikirwa kana kukuvadzwa kwezvinhu zvako zvinowira mukati zvirevo zvechikamu 10.1 kana clause 10.2 kana chero zvimwe zvirevo zvekurasikirwa kwemari zvakananga izvo zvisina kusiirwa nechero zvirevo 10.5.1 kusvika 10.5.6 zvinosanganisira iyi clause 10.5.
Kunze kwekunyatsotsanangurwa mune aya mazwi uye mamiriro, ese ekushandisa ruzivo rwako pachako anozoitwa zvichienderana nekwedu chengetedzo https://comwales.co.uk/privacy-and-cookies/ GDPR or other legislation also still applies. Your data will be kept and used for legal and financial purposes for upto 7 years then disposed of securly.
Kune yako chengetedzo, paunenge uchihodha kubva kwatiri isu chete tinoshandisa Yakachengeteka Socket Layer 3 (SSL3) tekinoroji, kuona kuti haugone kuisa kodhi nokusabvumiranwa.
Nekunyoresa chero zvako zvemunhu zvinyowani nesu, uri kubvuma kutitendera kuti titaure newe nezve chero zvigadzirwa kana masevhisi edu. Tinogona kupfuudza ruzivo rwako kumunhu wechitatu kunze kwekunge zvataurwa newe.
12. Kuchengetedza kuchengetedza kwako
Kuve nechokwadi chekuti chikwereti chako, kubhadharo kana kadhi rekubhadhara hazvisi kushandiswa pasina mvumo yako, isu tichaisa zita, kero uye rumwe ruzivo rwepamunhu iwe rwunopihwa newe panguva yekuraira kwacho kusangana nedanho rechitatu rebato.
Nekugamuchira aya Mamiriro neMagariro iwe unobvumidza kuongororwa kwakadaro kuri kuitwa. Mukuita izvi cheki munhu ruzivo rwakapihwa newe unogona kutaurwa kune yakanyoreswa Rejista Regency Agency iyo inogona kuchengeta zvinyorwa zveruzivo. Unogona kuzorora kuti izvi zvinoitwa chete kusimbisa chako chitupa, kuti chikwereti hachiitwe uye kuti chiyero chako chechikwereti hachizoitiswa. Ruzivo rwese rwunopihwa newe ruchabatwa zvakachengetedzeka uye zvakanyatsoenderana neDziviriro Dziviriro Act 1998 neGDPR.
Munguva yekuchengetedza kuchengetedza tinogona kukumbira rumwe ruzivo kana zvinyorwa kuti tibatsire kutsigira iyo data yawakapa.
13. Kunze basa
Kana iwe ukaraira Zvigadzirwa kubva kune yedu saiti yekuzvitakura kunze kweUK, zvinogona kuve pasi pekutumira / kutumira mabasa uye mitero inobhadharwa kana kutumira kwasvika kunzvimbo yakatarwa. Iwe uchave nemutoro wekubhadhara kwe chero mabasa akadai ekungenisa uye emitero. Ndokumbira kuti uone kuti hatina simba pamusoro pemhosva idzi uye hatikwanisi kufanotaura huwandu hwadzo. Ndokumbira ubvunze hofisi yako yemahofisi emuno kuti uwane rumwe ruzivo usati waisa odha yako.
Iwe unofanirwa kutevedzera zvese zvinoshanda nemirairo yenyika inoitirwa izvo zvigadzirwa. Hatizovi nemhosva yekutyora kupi zvako kwemitemo yakadai.
14. Yakanyorwa kutaurirana
Mitemo inoshanda inoda kuti imwe yeruzivo kana kutaurirana kwatinotumira kwauri ive mukunyora. Kana uchishandisa yedu saiti, iwe unobvuma kuti kutaurirana nesu kunonyanya kuve kwemagetsi. Isu tinokubata ne-e-mail kana kukupa ruzivo nekutumira zviziviso pawebsite yedu. Nekuda kwezvibvumirano, unobvumirana neiyi nzira yemagetsi yekutaurirana uye unobvuma kuti zvibvumirano zvese, zviziviso, ruzivo uye zvimwe zvinoshandiswa zvinokupa iwe zvemagetsi kutevedzera chero mutemo wepamutemo chinodiwa kuti kutaurirana kwakadaro kuve kwekunyora. Aya mamiriro haakanganise kodzero dzako dzinoverengeka.
Zvese ziviso zvakapihwa newe kwatiri zvinofanirwa kupihwa ComWales, Market Street, Pontypridd, RCT Wales CF37 2ST. Tinogona kukuzivisa iwe chero e-mail kana tsamba yepositi iwe yaunotipa iwe pakuisa kuraira, kana neimwe yenzira dzinotsanangurwa muchikamu 13 pamusoro. Cherechedzo ichanzi yakagashirwa uye nekunyatso shanda ipapo painotumirwa pawebsite yedu, maawa makumi maviri nemana mushure mekutumirwa ne-e-mail, kana mazuva matatu mushure mezuva rekutumira chero tsamba. Mukuratidza basa rechero chiziviso, zvichave zvakakwana kuratidza, mune iyo tsamba, kuti tsamba yakadaro yakanyatso nyorwa, yakamiswa uye yakaiswa muhofisi uye, mune iyo e-mail, kuti akadaro e- mail yakatumirwa kune yakatsanangurwa e-mail kero yemuridzi.
16. Kuendeswa kwekodzero nezvisungo
Chibvumirano pakati pako newe chiri kusunga iwe newe uye pane avo vanotevera vanobudirira uye vanopa.
Iwe haugone kuendesa, kugaja, kubhadharisa kana zvimwe kurasa chibvumirano, kana chero kodzero yako kana zvisungo zvinobuda pasi payo, pasina mvumo yedu yakanyorwa yekutanga.
Tinogona kuchinjisa, kugovera, kubhadharisa, kubvumirana, kana zvimwe kurasa chibvumirano, kana chero kodzero yedu kana zvisungo zvinobva pasi payo, chero nguva panguva yeKutenderana.
17. Zviitiko zviri kunze kwekutonga kwedu
Hatizovi nemhosva kana kuita chero chekutadza kuita, kana kunonoka mukuita, chero zvipi zvezvisungo zvedu pasi pechibvumirano chinokonzerwa nezviitiko zviri kunze kwekutonga kwedu zvine musoro (Force Majeure Chiitiko).
Force Force Majeure Chiitiko chinosanganisira chero chiitiko, chiitiko, chisingaitike, kusiiwa kana tsaona yakadarika yedu yekugona kudzora uye inosanganisira kunyanya (pasina kuganhurirwa) zvinotevera:
kurova, kukiya-kunze kana kumwe kuita kwemaindasitiri.
mhirizhonga yevagari vemo, mhirizhonga, kurwisa, kurwisa kwemagandanga kana kutyisidzira kwekurwisa kwehugandanga, hondo (ingave yakaziviswa kana kwete) kana kutyisidzira kana kugadzirira zvehondo;
moto, kuputika, dutu, mafashama, kudengenyeka kwenyika, kuderera, denda, denda kana imwe njodzi dzinongoitika dzoga;
kusakwanisika kwekushandiswa kwenjanji, kutumira, ndege, kutakura mota kana imwe nzira yekufambisa yeruzhinji kana yega;
kusakwanisika kwekushandiswa kweruzhinji kana vepamhepo telecommunication network;
zviitwa, zvirevo, mutemo, mitemo kana zvakatemerwa chero hurumende.
Kuita kwedu pasi pechibvumirano chero chipi zvacho kunonzi kuchamiswa kwenguva iyo Simba Majeure Chiitiko ichienderera, uye tichava nenguva yakawedzerwa yekuita mukufamba kwenguva iyoyo. Tichashandisa kuedza kwedu kwakaringana kuunza Force Majeure Chiitiko kuvhara kana kutsvaga mhinduro yatinogona kuita nayo zvibvumirano zvedu pasi peConstitution kunyangwe iwo maCosta Majeure Chiitiko.
Kana tikatadza, chero nguva panguva yekontrakiti, kuti tisimbise kushanda kwakashata kwezvibvumirano zvako pasi pechibvumirano kana imwe yeaya mamiriro ezvinhu nemamiriro ezvinhu, kana tikatadza kushandisa chero kodzero kana mishonga yekupi isu vane kodzero pasi pechibvumirano, izvi hazvisi kuzoita mutambudzi wekodzero dzakadai kana mishonga uye hazvizoregedze kubva pakuteerana nezvisungo zvakadaro.
Chiuno chinobvumirwa nesu chero chekushomeka hachiiti kuti chigadzikise chero chinhu chinotevera chakanganisika.
Hakuna unosunungura nesu chero yeaya mamiriro aya nemamiriro ezvinhu achave anoshanda kunze kwekunge zvataurwa zvakajeka kuti uri waiver uye unotaurwazve kwauri uchinyora zvinoenderana negwaro 14 riri pamusoro.
Kana imwe yeaya marevhesi neMagariro kana chero zviga zveConstitution zvakatemwa chero anokwanisa mvumo kuti ive isingabvumirwe, isiri pamutemo kana kusingasimbisike kusvika padanho ripi neripi, nguva, mamiriro kana hurongwa huchabviswa pane zvasara miganho, mamiriro ezvinhu izvo zvicharamba zvichishanda kune kuzere kuzere kunotenderwa nemutemo.
20. Chibvumirano chakakwana
Isu tinotarisira kutsamira pane aya mazwi uye mamiriro uye chero gwaro rinotaurwa zvakajeka mukati mavo maererano nenyaya yezvinyorwa zveContrak. Tichiri kugamuchira mutoro wezvirevo uye zvinomiririrwa zvakaitwa nevamiririri vedu vane mvumo, tapota ita shuwa kuti unobvunza chero mutsauko kubva pane aya mazwi uye mamiriro ezvinhu kuti ubvumidzwe mukunyora.
21. Kodzero yedu yekusiyanisa aya mazwi nemamiriro
Iwe unozoiswa pasi pemaitiro nematemu uye mamiriro ezvinhu anoshanda panguva iyo iwe unoraira zvigadzirwa kubva kwatiri, kunze kwekunge chero shanduko kune iyo maprisi kana aya mazwi uye mamiriro ari anofanirwa kuitwa nemutemo kana ehurumende masimba (mune iyo mamiriro shandisa kumirayiridzo yaimboiswa newe kare, kana kana tikakuzivisa nezve shanduko kune iyo nqubomgomo kana aya mamiriro uye mamiriro ezvinhu tisati takutumira iwe Gamuchiro Yekubvuma (mune iyo mamiriro isu tine kodzero yekufunga kuti wabvuma shanduko kune iyo mitsara uye mamiriro, kunze kwekunge iwe uchitizivisa kune zvinopesana mukati memazuva manomwe ekushanda ekugamuchirwa newe izvo zvigadzirwa).
22. Mutemo uye kutonga
Zvibvumirano zvekutenga Zvigadzirwa kuburikidza nesaiti yedu uye chero kukakavara kana zvinobuda zvinobuda muiri kana kubatana navo kana nenyaya yavo kana kugadzirwa (zvinosanganisira zvisiri muchibvumirano kana zvirevo) zvichave zvichitongwa nemutemo wechirungu. Chero kupokana kana kubvunzana kunobuda kunze kana kubatana neContracts kwakadaro kana kuumbwa kwavo (kusanganisira non-chibvumirano nharo kana zvirevo) zvichave zvichitongwa kusiri-kwega kutonga kwedare reEngland neWales.
ComWales, Capital tower Bhizinesi Center, 3rd Floor, Capital tower, Greyfriars Road, Cardiff, CF10 3AG
Isiri Yekugamuchira Zvezvinhu
Kana usati wagamuchira zvinhu zvako unofanirwa kutizivisa mukati memazuva manomwe kubva panguva yakatarwa yekusvitsa kana chaiyo yekutumira zuva. Kana tangoziva kuti hauna kugamuchira chinhu chako tichaferefeta nyaya iyi zvizere mukati uye nevatakuri vedu. Zvine kusuwa isu hatigone kuongorora risati ratumirwa kuburitsa kana nguva ino yapera.
Inodzoka uchishandisa yako yega nzira yekutumira
Chete pazvinhu zvakakanganisika kubva pakuwanikwa mukati memazuva gumi nemana Kana iwe ukasarudza kudzorera chakaremara chigadzirwa kwatiri uchishandisa yako wega nzira yekuendesa, isu tinodzosera inosvika ku £ 14 yemitengo yawakawana iwe. Izvi zvinongodzoserwa pakagashira humbowo hwemitengo yekutakura. Isu hatizobhadhara kana kudzorera chero mari yekutumira kana iwe ukango shandura pfungwa dzako nezve kutenga kwako.
Zvinhu Zvakakuvadzwa muTrans
Kana paine chero zvinhu zvakakanganiswa mukufamba, tinokumbira kuti utizivise izvi mukati memaawa makumi maviri nemana (ndapota ziva kuti aya maawa gumi nemaviri evatengi vebhizinesi redu). Kana zvinhu zvacho zvikaonekwa zvakakanganisika pakutambirwa, zvakanak kusaina mutakuri wekutakura maererano. Zvinhu zvinofanirwa kudzoserwa mumapakeji avo epakutanga akazara nezvose zvishongedzo uye zvinyorwa. Kana tangogashirwazve kuimba yedu yekuchengetera, tinokupai kutsiva kana kudzoreredza kuzere kwauri nenzira yako yekutanga yekubhadhara uye kudzorera yako inodzoka inodzora yekutakura inodhura £ 24 kana ukasashandisa yedu yekudzorera chitaridzi.
Zvinhu Zvakatadza pane Kusvika
Kana zvinhu zvako zvisina kukodzera pakusvika, iwe une mazuva makumi maviri neshanu ekutiudza isu nezve dambudziko (ndapota ziva kuti kune vatengi vebhizinesi redu, aya mazuva gumi nemana yekarenda). Zvinhu zvinofanirwa kudzoserwa mumapaketi avo epakutanga zvakazara nezvose zvinongedzo nezvinyorwa. Kana tangoongorora chikanganiso, isu tinopa chimwe chinodzoreredzwa kana kuti chizere chizere kwauri kuburikidza neako yekutanga nzira yekubhadhara uye nekudzosera yako inonzwisisika yekudzoka mitengo. Isu tinoedza kudzosera zvinhu, uye kana chinhu chakadzoserwa chikawanikwa chikasava nemhizha isu tinodzosera chinhu icho kwauri, mune ino chiitiko iwe unenge uine mhosva yekutakura yekudzoka.
Zvinhu Zvakatadza muWaranti Yenguva
Kana imwe yekutenga kwako ikava nechikanganiso, uye inopfuura mazuva makumi maviri neshanu kubva pakaremerwa, zvino zvakapihwa chinhu chako chiri mukati menguva yayo yemvumo, une kodzero yekugadziriswa waranti. Mune zvimwe zviitiko, vagadziri vanopa nyanzvi yakazara pa-saiti webasa uye / kana mafoni ekubatsira nhare dzako kuti zvireruke isu tinokukurudzira kuti ushandise kuitira kugadzirisa chikanganiso nekukasira. Kune vatengi vebhizinesi kugadziriswa kwese waranti mushure memazuva makumi maviri nemasere ekugamuchirwa kunoendeswa zvakananga kumugadziri (kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira)
Vhura-Bhokisi Zvinhu / Ex-Display
Ndokumbira utarise kuti yedu yakavhurika-bhokisi / ex-kuratidza sitendi inotengeswa neyekarenda 90 mazuva waranti chete, uye nekudaro chero zvichemo zviri pasi pewaranti mushure memazuva makumi mapfumbamwe ekugamuchira hazvigamuchirwe.
Kana iwe ukachinja pfungwa dzako
Instore vatengi havagone kudzima kana chinhu icho chabhadharwa, kubviswa uye kushandiswa. PaInternet Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinja pfungwa dzako nezve chero chinhu chakarairwa uye uchishuvira kuidzosera, zvino zvinoenderana neDanho rekutengesa Mitemo (Mutengi chibvumirano) iwe unokwanisa kuzviita iwe chero ukatizivisa nezvechisarudzo chako mukati memazuva gumi nemana wagamuchira.
Chinhu icho hachifanirwe kushandiswa uye chinofanira kunge chiri 'sechitsva' kana chadzoserwa kwatiri, kana mubhadharo unogona kubhadharwa. Kana iwe uchinge watizivisa kuti iwe unoda kudzosera zvinhu pasi peDSR, iwe une mazuva gumi nematanhatu ekuita kudaro, nekubhadhara kwako. Kana chinhu chacho chave kugamuchirwa kuComWales, tinobva tadzosera mari yakazara yechigadzirwa kune yako yekutanga nzira yekubhadhara uye yepositi kana yakatumirwa. Zvibvumirano zvekutakura hazvidzorere. Ndokumbira utarise iyi mutemo ine zvimwe zvaisingakwanise uye haishande kune vatengi vebhizinesi. (Iyo Dhigirii Kutengesa Mitemo haishande pakutenga kwakagadzirwa muchitoro kana @work vatengi kana vatengi vedu Bhizinesi B14B) Zvinhu zviri kunze kweDRR kana zvakakanganisika / zvisingaenderane zvinogona kurambwa uye kudzoswa isu tinochengeta kodzero yekupa mari yekudzoserwa pasi pezve kubhadharo zvakare 2% mubairo kana zvichishanda uye kupihwa. Vatengi vevatengesi havana kodzero yekushandurwa kwepfungwa kudzoserwa kunze kwekunge tabvumirana kumberi sezvo tisiri kutengesa zvinhu pachiyedzo.
Unoda kudzosa chinhu here?
Iwe unogona kukumbira kudzoka uchishandisa yedu nyore kushandisa, online inodzoka system iyo inowanikwa kuburikidza neakaunti yako. Neimwe nzira tumira chinhu chako kune yakasarudzika kero ine yako yekurodha uye chikonzero chekudzoka kana pop mudura kuzokurukura nyaya yako.
Pamusoro pezve mutemo uyu unofanirwa zvakare kunongedzera kune yedu B2C Mashoma neMamiriro Ekutengesa.
Ndeipi ISO 13406-2 chiyero cheLCD screen pixel zvikanganiso?
Maitiro ehunyanzvi hwekugadzira nhasi haakwanise kuvimbisa chakashata chikwangwani. Angori akapararira anogara achiwaridza kana asina kupatsanurwa mapikicha anogona kuve aripo.
Tafura iri pazasi inoratidza huwandu hunobvumidzwa hwekusagadzikana kwepikisheni inogamuchirika, zvichienderana nesarudzo yemunyika yeLCD uye kubvumira pixels mbiri dzisina kunaka pamamiriyoni pixels.
Kugadziriswa kwaNative Nha. YePixels Nha. YeMamirioni Pixels Anogamuchirika Kuremara
Tafura iri pazasi inoratidza nhamba inobvumirwa yekusagadzikana-pixels inogamuchirika, zvichienderana nesarudzo yekudaro yeLCD uye kubvumira kwemashanu kusashanda-pixels pamamiriyoni pixels.
Tafura iri pazasi inoratidza nhamba inobvumidzwa yekusagadzikana-pixels inogamuchirika mukati me5 x 5 block yemapikseli, zvichienderana nesarudzo yemunyika uye kubvumira ma 2 zvisina basa pixels mukati me5 x 5 block, pamamepikisheni emamirioni.
Kutsanangura maitiro edu ekubata kunyunyuta.
Isu tinovimbisa kubata nezvichemo zvese:
kurumidza kuita zvine hungwaru kwazvo
Isu tinovavarira kupa chiyero chekushumirwa kune vatengi vedu nevamabhizinesi vehukama icho chechipiri kune icho, asi pane dzimwe nguva zvinhu zvinokwanisa kuramba zvichienderera nenzira iyo yanga isina kuitirwa. Izvi zvingaitika, sechikamu chekuzvipira kwedu kugona, maitiro edu ekubata kunyunyuta akagadzirirwa kugadzirisa chero matambudziko nekukurumidza.
Nhanho 1 Pakutanga kutaurira kunyunyuta, ndapota taura yako kana nhamba yevatengi, chirevo chedu, zvizere nezvekusagutsikana kwako, uye zvaunoda kuti isu tiite kuitira kugadzirisa nyaya iyi.
Muchiitiko chekutanga, tinokukurudzira iwe, neimwe nzira inonyanya kukubatsira, kuti ubate kana munhu ari kubata nenyaya yacho, kana kana izvi zvisina kukodzera chero chikonzero, unogona kubata Dhipatimendi Redu Rehukama zvakananga. uchishandisa imwe yeiyi inotevera nzira:
01495687587 (maawa ekushanda ari 9am - 5pm, Muvhuro kusvika Chishanu kusabatanidza mazororo ebhangi). Kune edu ekudzivirirana pamwe uye kudzidziswa zvinangwa, mafoni anogona kunyorwa.
COMWALES LTD, Capital Tower Bhizinesi Cent, 3rd Floor, Capital tower, Greyfrairs, CARDIFF CF10 3AG
Nhanho yechipiri kana ukaramba usingagutsikane iwe unogona kuteedzera yako kunyunyuta zvakare nekukwidza.
Nhanho 3 Kana isu tisingakwanise kugadzirisa gununuro renharembozha mukugutsikana kwako, ipapo unogona kuzokwanisa kuendesa nyaya yacho kuOmbudsman Services. Vanogona kufonerwa ku:
Ombudsman Services (Telecoms)